Rindrambaiko sy fitaovana tsy ho vitako raha tsy misy | Martech Zone
Rindrambaiko sy fitaovana tsy afaka niainako raha tsy teo aho
Zoma, Desambra 25, 2009 Alatsinainy Janoary 1, 2018 Lorraine Ball
Reading Ny lahatsoratr'i Doug Ny Tompo dia nahatonga ahy hieritreritra momba ny rindranasa rehetra niankina tamiko tao anatin'ny ampahan'ny fitantanana ny orinasako sy ny fiainako. Maromaro, Tungle sy Dropbox, efa noresahin'i Doug. Nefa ity misy lisitr'ireo olona vitsivitsy tsy azoko an-tsaina ny fiainana raha tsy:
WebNotes - Ity dia ampahany sarobidy amin'ny fikarohana ataoko amin'ny Internet. Na manandrana mitady vaovao ho an'ny tetikasan'ny mpanjifa aho, na mitaona aingam-panahy amin'ny lahatsoratra bilaogy, na manara-maso ny valin'ny fampielezan-kevitry ny PR, WebNotes dia mamela ahy haka sy handamina vaovao miaraka amin'ireo naoty-naoty na fanasongadinana. Ary ny ampahany tsara indrindra dia ny fitaovana fitaterana tatitra. Rehefa miaraka amina fampandrenesana Google mandeha ho azy izahay dia toa nandany ora maro nitady ny tranonkala sy nanomana ny tatitra famintinana!
AdiresyTwo - Mihoatra ny boky adiresy, fitaovana CRM tena izy io. Nampiasa tobim-data maromaro aho nandritra ny taona maro hitantanana ny fifandraisako, Access (Nanangana ny ahy aho, ny zazalahy dia io geeky), ACT ary ny Outlook ary hitako fa mifanentana amiko tsara ity iray ity. Mifototra amin'ny Internet, afaka mizara ny fifandraisako amin'ny ekipako iray manontolo aho. Azontsika atao ny mitantana ny fifandraisana sy ny tetik'asa amin'ny lisitry ny laharam-pahamehana. Ary koa, miainga tsikelikely avy any ConstantContact mankany amin'ny fitaovana mailaka AddressTwo aho. Na dia voafetra kely aza izy io amin'ny endrika famolavolana sy fitaterana, tiako ny fahaizana manontany ny angon-drakitra, mamantatra ny vondrona sahaza azy fotsiny, ary mampita ny hafatra sahaza azy.
Tiako ihany koa ny fahaizana mandefa mailaka an'i Addy miaraka amin'ny anaran'ny olona tiako ampidirina ao amin'ny angon-drakitra misy ahy na mifampahafantatra ary izy no mikarakara izany. (Eny fantatro fa tsy tena olona izy, fa indraindray mahavita zavatra betsaka kokoa noho ny tena mpiasa izy, ka sarotra ny tsy mieritreritra azy ho olona)
sahy - Ny olona mahalala ahy tsara dia mahatsikaiky fa mahatsikaritra fa mitady asa fivelomana amin'ny maha mpanoratra aho, satria tsy mpanoratra. Mpiresaka aho! Amin'ny maha mpandaha-teny ahy dia nahaliana ahy ny hevitra ny manampy podcast ny blaogiko ary Audacity no nahatonga izany. Miaraka amin'ny fotoana kely ampiasana vola dia nifindra tamin'ny novista aho ka nanamboatra pro. Tsy afaka manitsy na dia kely aza aho, na ny fahatapahan'ny antso an-tariby. (Na dia avelako ho ao aza izy ireo indraindray, satria fotsiny hoe manampy toetra izy ireo).
Tiako ny zava-misy fa ny podcast isan-kerinandro dia mampihena ny habetsaky ny fanoratana tokony hataoko, fa misy tombony hafa ihany koa. Manome fialan-tsiny hanasana ahy ireo programa namana amin'ny fandaharana fandraisam-peo sy fitsidihana. Ankehitriny rehefa nianatra nitantana teknolojia aho, minitra vitsy dia vitsy ny fandraisam-peo, avy eo manam-potoana hahatratra sy hiresaka zavatra hafa isika!
Ireo fampiharana telo ireo dia vaovao ho ahy tamin'ny 2009. Mahagaga fa haingana dia lasa ampahany amin'ny fiainanao ny teknolojia vaovao. Tsy andriko izay hahitako ny zavatra hitako amin'ny taona ho avy!
Tags: miresaka roasahyRoundpegfitaovanawebnotes
Dec 25, 2009 amin'ny 11: 44 AM
Mahaliana ny mahita ny fitoviana misy eo amintsika, Lorraine! Tsy mbola nanandrana ny AddressTwo aho - saingy mety hisy CRM ato ho ato.
Dec 25, 2009 ao amin'ny 12: PM PM
Inona no lazain'izy ireo momba ny saina lehibe?